Asidra kafeinina mena Phenethyl Ester Powder (104594-70-9) - Phcoker
Ny vovo-dronono phenethyl ester asidra kafeinina dia ny ester alika phenethyl misy asidra caffeic ary bioactive …… ..
Rano kaferika poetika poetika (104594-70-9)
Rano karbenika asidin'ny ethanol-poeter (104594-70-9) Specifications
Product Name Ny kôdôkôma asidra roapolo ety anaty karbenika
Anarana simika Ny kôdôma mpanadio ketsa roapolo vita amin'ny kôdôksa;
Caffeate phenylethyl; Phenethyl caffeate; Kanseran'ny atiny 2-phenylethyl ester; β-phenylethyl caffeate;
molekiolan'ny Formula C17H16O4
molekiolan'ny Wvalo 284.311 g / mol
mitsonika Point 125-126 ° C (dec.)
Tavy 498.6 ± 45.0 ° C amin'ny 760 mmHg
Color fotsy manopy mavo
Solubility Azo alaina amin'ny acetate etyl ao 50mg / ml. Dibo-drano amin'ny DMSO sy ethanol.
Storage Temperature Tehirizo ao amin'ny 0 ° C
Ny kofehy manifin-kanafom-panafody ethanetera Application Zana-tsokosoko miady amin'ny tsimok'aretin'ny sela. Inhibitor amin'ny ornithine decarboxylase sy proteinina tyrosine kinase. Hita fa singa voafaritra mazava amin'ny fotodrafitrasa nokleary nokleary, NF-kB. Nasehony koa ny nanakana ny lipoxygenase ny aretin-tsakafo arachidonika nandritra ny fiterahana.
Rano kaferika poetika etona (104594-70-9)
Ny kôdôtera asidra roapolo vita amin'ny kofehy vita amin'ny ethanolahy dia ny ethanolan'ny kôfinika sy ny bioactive ao amin'ny tantely tantely, izay misy antineoplastika, cytoprotective ary immunomodulating activity. Raha ny fitantanana dia manakana ny fampidirana ny fotodrafitrasa nokleary NF-kappa B ny kinofa poeta ety anaty rano (CAPE), ary mety hanafoana ny sori-dàlana p70S6K sy Akt. Ankoatra izany, ny CAPE dia manakana ny fampiroboroboana ny sela misimom-pandehan'ny PDGF amin'ny alàlan'ny fampidirana ny p38 mitogen-activated kinase (MAPK) sy ny Hypoxia-inducible factor (HIF) -1alpha ary ny fampidiran-dàlana heme oxygenase-1 (HO-1) .
Ny asidra kafeinina phenethyl ester dia voalaza fa manana toetra anti-karsinogenika, anti-inflammatoire ary immunomodulatory. Ny CAPE koa dia manakana ny fampidirana HIV-1. Ny toetra manohitra ny inflammatoire dia noheverina fa vokatry ny fanakanana ny lipoxygenase làlan'ny metabolisma asidra arachidonic avy amin'ny CAPE. Ny fandinihana dia naneho ihany koa ny CAPE ho mpanakanana manokana sy mahery vaika ny fampidirana ny fotodrafitrasa nokleary NF kappa B, izay proteinina sarotra mifehy ny fandikana ny ADN. Ny Caffeic Acid Phenethylester dia mpanakana ny ODC sy ny Tyrosine Kinase
Powder phenethyl ester asidra kafeinina (104594-70-9) Mekanisme ny hetsika
Ny karbôna fisidinan'ny asidra ketety dia singa iray amin'ny tantaram-pivaran'ireo tantely tantely, manakana ny fampidiran-drivotra NF-κB, indraindray amin'ny phorbol ester, ceramide, asid okadaic, ary peroxyde hydrogène amin'ny fisorohana ny fandikana ny fametahana p65 an'ny NF-κB amin'ny atin'ny nucleus. Ao amin'ny andiam-panahin'ny sela, ny kinifenan'ny phenet etereta dia mampiseho ny fanatanterahana ny antiproliferative amin'ny EC50 amin'ny 1.76, 3.16, 13.7, ary 44.0 μM amin'ny muron colon 26-L5, murine B16-BL6 melanoma, ny fibrosarcoma HT-1080 olombelona ary ny lunga A549 olombelona adenocarcinoma line lines, respectively. Ny kionkônina asid pheneton, toy ny antioxidant malemy, dia mampiasa ny vokany manohitra ny apopototoka ao amin'ny cellules cerebellar granules amin'ny fanakanana ROS ny fiofanana ary ny fanakanana ny asa atao. Ankoatr'izay, ny endri-pandehan'ny asidra kafenikana dia manenika ny endriky ny fôpôtika manintona ny HSCs, ary ny LPS-induced sensibilisation ny HSCs amin'ny cytokines fibrogenika amin'ny fampihenana ny famantarana NF-κB.
Ao amin'ny vivo, ny ketsa (phenomide ethanetan'ny kafetsika) (10 mg / kg, ip) dia manakana ny fivoarana sy ny angiogenesis ny tumors voalohany amin'ny karazam-biby C57BL / 6 sy BALB / c izay voan'ny kanseran'ny kanseran'i Lewis, ny kanseran'ny kômonôna, ary ny sela melanoma. Ny endri-ketsa pheneter Ester (5, 10, 20 mg / kg) dia mampiseho ihany koa ny fiantraikan'ny immunodulatory viva amin'ny vivo amin'ny fihenan'ny lanjan'ny tosika sy / na ny selularity ny thmus sy ny kalsioma.
Fampiharana ny vovo-ketem-pandehan'ny ethaneran'ny ketety (104594-70-9)
▪ Mpanakana NFkB
soa azo avy amin'ny Kaomina mpanolo-pandrefana ety ety (104594-70-9)
Phenethyl caffeate dia fitambarana hita ao amin'ny propolis, mifangaro vokarin'ny tantely. Ny asidra kafeinina phenethyl ester (CAPE) dia mety hahomby amin'ny fisorohana sy fitsaboana ireo aretina mamaivay ao anatin'izany ny aretin'ny rheumatoid, ny systemis lupus erythematosus ary ny psoriasis, ny homamiadana isan-karazany sy ny aretina misy ny fivontosan'ny fivontosana, ny katarakta ary ireo aretina hafa vokatry ny adin-tsaina. Ankoatr'izay, ny CAPE dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny tsimokaretina VIH rehefa atambatra amin'ny fifangaroan'ny fanafody miaraka amin'ny zavatra manakana ny famerenan'ny VIH. Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny anti-atherosclerotic, antioxidative, cardioprotective, anti-obesity ary antimitogenic.